Tsara ve ny manantena ankizy be loatra? | Bezzia
Maria Jose Roldan | 17/09/2021 22:21 | Ampianaro ny ankizy
Manaiky ny ray aman-dreny rehetra rehefa manondro ny fitaizana sy fanabeazana ny zazaTsy asa mora izany ary mila faharetana sy fikirizana be. Mivoatra ny ati-dohan'ilay zaza ary anjaran'ny ray aman-dreny ny mahazo ny zaza tsikelikely, afaka manao zavatra samihafa izay manampy azy hanana fahaleovan-tena manokana.
Tokony ho fantatrao ny faharetana ary aza antenaina hianatra zavatra ny zanakao amin'ny voalohany. Matetika ny ray aman-dreny maro no tojo olana toy izany ary dia ny antenain'izy ireo avo kokoa noho ny tena izy. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka aminao izahay raha tsara ny mamorona andiana andrasana amin'ny ankizy.
1 Ny maha-zava-dehibe ny fanajana ny fahazazana
2 Ankizy fotsiny ny ankizy
Ny maha-zava-dehibe ny fanajana ny fahazazana
Tsy misy teraka nahalala ary izany no antony ilain'ny ankizy ny fanampian'ny ray aman-dreniny raha ny amin'ny fahalalana zavatra sasany ary ny fivoaran'ny ati-dohany no tena mahomby indrindra. Ny ankizy dia tsy maintsy tarihin'ny ray aman-dreniny amin'ny fotoana rehetra raha ny amin'ny resaka ianarana ary azo antoka fa mandritra ny taona maro dia mianatra ny hanana fahaleovan-tena sy hiankina izy ireo. Ankizy ny ankizy ary tsy afaka manantena ny ray aman-dreny fa amin'ny fotoana voalohany iovany dia hahafantatra ny fomba firesaka sy hifandraisana amin'ny hafa izy ireo. Ny fahazazana dia dingana lava izay mila faharetana be amin'ny ray aman-dreny, satria tsy ny zavatra rehetra dia ianarana ao anatin'ny iray andro.
Tsy misy isalasalana fa ny ray aman-dreny dia mety ho mandreraka be ho an'ny ray aman-dreny, saingy tsy apost ity ho an'ny kely mba iharan'ny fangatahana mitohy. Na eo aza ny havizanana, ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manam-paharetana amin'ny zanany mandrakariva ary manaraka ny torolalana ilaina momba ny fampandrosoana sy ny fianarana.
Ankizy fotsiny ny ankizy
Tsy misy zavatra mahafa-po sy mampionona kokoa ho an'ny ray aman-dreny noho ny mijery ny zanany mianatra zavatra vaovao isan'andro. Ny fahaizana mahita ny fomba fitomboan'ny zaza iray ary tsikelikely dia lasa mahaleo tena zavatra tena mahafinaritra ho an'ny ray aman-dreny izany. Tena ara-dalàna amin'ny ankizy ny manao fahadisoana miverimberina mandra-pahalalany zavatra. Zavatra voajanahary sy voajanahary amin'ny zanak'olombelona izy io fa tsy noho io antony io dia tokony hilavo lefona ny ray aman-dreny na tsy hanana faharetana.
Ny ankizy dia zaza fotsiny ary tokony hanao toy izany izy ireo. Ny ray aman-dreny dia tokony hiala amin'ny andrasana noforonina ary hankafy ny fahazazan'ny zanany. Mandritra ny taona maro dia hitombo ny ankizy ary ny fianarany sy ny fizotrany dia hitohy hiankina amin'ny azy manokana.
Raha fintinina, maro ny ray aman-dreny ankehitriny no manao ny hadisoana lehibe amin'ny famoronana fanantenana ho an'ny zanany, izay amin'ny farany tsy feno tanteraka. Ny fianarana dia dingana iray somary lava izay mitaky faharetana be avy amin'ny ray aman-dreny. Ny ankizy dia tsy maintsy avela hianatra zavatra amin'ny hafaingany fa tsy mahatsapa ny fangatahana avy amin'ny ray aman-dreniny. Ny fahazazana dia dingana mahafinaritra tokoa amin'ny fiainana, izay tokony hankafizin'ny ankizy sy ny ray aman-dreny fatratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Tsara ve ny manantena ankizy be loatra?
Araraoty ny patchwork ao an-trano